Flip4Mac waxaa inta badan loo isticmaalaa in kordhin QuickTime si ay u taageeraan codecs iyo qaybaha Windows warbaahinta taageero on Mac. Laakiin update ugu dambeeyay Yosemite ayaa sababay dhibaatooyin ay u isticmaala badan; mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn waa in Flip4mac ayaa joojiyay ka shaqeeya. Kuwa haysta dhibaato la mid ah oo raadinaya xalka ugu wanaagsan, aad tahay meel sax ah.
In this article waxaan ku siin doonaa, iyadoo labo xal kaa caawin doona arrimaha ku saabsan Flip4mac. Xalka ugu horeysay in aad isku dayi kartaa rakibidda waa ciyaaryahan video awood badan si aad u computer laakiin hubi in ay tahay la jaan qaada Yosemite for loo maqli karo. Xal kale oo aad ka fiirsan kartaa waa adigoo diinta video ah in qaab file Yosemite taageeray oo ciyaaro la isticmaalayo QuickTime. Wixii faahfaahin dheeraad ah, hoos ku qoran akhri.
Su'aalaha ku saabsan Flip4Mac iyo Yosemite Related Dhibaatooyinka
Xalka 1: Ku xiridda Video Player sida Alternative for Yosemite
Xalka 2: Beddelaan Your Video Faylal ay si qaabab QuickTime taageerayaan
Xalka 3: Beddelaan Your Video Faylal ay la An Online Free Video Converter
Maxaad videos iyo Cajalado aan mar dambe la QuickTime ciyaaro ka dib markii aan ku rakiban Yosemite?
QuickTime waayi doonaan awood ay si ay u taageeraan files AVI marka aad u cusboonaynta in Yosemite.
Maxaad QuickTime uusan ka shaqeeya ka dib markii aan updated aan nidaamka OS X Yosemite joojiyey?
Flip4mac ee jirka version lama jaanqaadi Yosemite, laakiin haddii aad u cusboonaynta in ay version cusub, waxa ay ka shaqeeyaan. Version cusub la yimaado watermark; Si kastaba ha ahaatee, aad wax Faydi haddii aad rabto. Perian la og yahay in ay bedel fiican u Flip4mac, laakiin waxa ay sidoo kale ma shaqeeyaan Yosemite.
Waa maxay sababta aan ma furi kartid AVI iyo wmv qaab files aan la Flip4mac dambe ka dib markii la xariirta aan Yosemite?
Apple ayaa si rasmi ah shaaca ka qaaday in QuickTime ma laha interfaces dheer la Yosemite; Sidaa darteed, files Windows Media ma haysanno ciyaaryahanka QuickTime Media shaqeeyaan.
Ma jiraa dhawaaqay waqti go'an oo suuragal ah in update cusub QuickTime?
Ilaa hadda Apple aan la siin wax war ah oo ku saabsan arrintaan.
Xalka ugu horeysay waxaad isku dayi kartaa rakibidda waa ciyaaryahan awood badan warbaahinta si ay u sameeyaan shaqada QuickTime, mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee warbaahinta waxaad isticmaali kartaa waa Wondershare Player .
Yosemite taageeri karaan ciyaaryahanka Wondershare, sidaa daraadeed waxa uu noqon karaa mid kale oo wanaagsan oo Flip4mac.
Waxaad ku raaxaysan karaan daawashada cajaladaha oo aan wax xaddidaadda qaabab. Wondershare Taageeri karaan inta badan qaabab warbaahinta. In kastoo, QuickTime taageeri kartaa oo kaliya qaabab video xaddidan; MOV iyo MP4.
Ciyaaryahan warbaahinta Tani waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo aad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah. Ma aha in aad ka walwasho wax ka qabashada barnaamijka adag, waxa uu leeyahay interface user-friendly ah, oo aadan u baahan tahay nooc kasta oo ka mid ah Casharrada dambe!
Download Simple iyo rakibi Wondershare Player inay ku raaxaystaan ​​daawashada cajaladaha on QuickTime.
Arintanina, idinka badbaadin doonaa, oo ka rakibidda ciyaaryahan cusub si aad u computer sida kale oo u Yosemite. Waa maxay kaliya ay tahay in aad samayso waa in loogu badalo aad files warbaahinta in QuickTime ay taageerayaan qaab, kuwaas oo MOV ama MP4. Waxaad kala soo bixi kartaa oo isticmaali Wondershare Video Converter u Mac sida kale u fiican Flip4mac; waxaa kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo warbaahinta Windows kasta oo file in aadan ka ciyaari karaa Yosemite. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad xaalkaa files warbaahinta aad dhex iMovie.
Tallaabada 1 dejinta Your Video Faylal ay si Wondershare Video Converter
Waxaad ku samayn kartaa adigoo si fudud u soo jiiday file bartilmaameed ama faylasha aad iyo waxa u tiiri si Video Wondershare ka Converter.
Tallaabada 2 Dooro QuickTime Qaabka ay taageerayaan sidii aad Output
Qaab file MOV waa inta badan la isticmaalo qaab ay ku ciyaaraan ee QuickTime. Sidaa darteed, waxay dooran MOV sida qaab wax soo saarka aad. Si fudud u tag qaybta hoose leeg- software iyo dooran ka walxood qaabka. A suuqa kala socod markaas tusi doonaa. Just guji "MOV" ka category video ah.
Tallaabada 3 Start Conversion Video ah
Si fudud u tagaan oo ay u geeska qaybta hoose midigta ah ee suuqa kala guji "Beddelaan" button, diinta video ah Markaasaad bilaabi doonaa.
A online video Converter free waa hab sahlan loo helo video badaley aan ku rakibidda wax.
Converter WebM: Beddelaan WebM in qaab kasta oo qeybsanaan
> Resource > Beddelaan > Hel Best Flip4mac Alternative for Yosemite